के सत्ताबाट निष्कासित हुँदैछन् ट्रम्प ? – Makalukhabar.com
आइसक्रिममा भेटियाे काेराेना भाइरस
दर्शक बिनै एकाउन्न दिन ?
कर्नाटकमा गौहत्या गरे १० वर्षसम्म जेल !
‘तान्डव’ विवाद बढ्दै : भाजपा नेताले दिए उजुरी
के सत्ताबाट निष्कासित हुँदैछन् ट्रम्प ?
डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश, बुधबार छलफल हुँदै
मकालु खबर	 Jan 12, 2021 मा प्रकाशित 116
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियाेग प्रस्ताव पेश भएकाे छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीले ट्रम्पविरुद्ध महाअभियाेग प्रस्ताव पेश गरेकाे हाे ।
राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा हार बेहाेरेका ट्रम्पकाे नेतृत्वमा केही दिनअघि वाशिङ्टन डिसीमा हिंसा भएकाे भन्दै सिनेटकी सभामुख नेन्सी पेलोसीसहित धेरैजसो डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदहरू समेत ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसबाट निष्कासित गर्न चाहन्छन् ।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पकाे कार्यकाल २० जनवरीमा सकिँदै छ । उनको कार्यकाल समाप्त हुनु अगाडि नै ह्वाइट हाउसबाट निष्कासित गर्ने तयारी स्वरूप महाअभियाेग पेश गरिएकाे बीबीसीले जनाएकाे छ । उक्त प्रस्तावमाथि बुधबार छलफल हुँदैछ ।
राष्ट्रपतिलाई सभामा महाभियोग ल्याउन बहुमत चाहिन्छ । सदनमा डेमाेक्रेटिक पार्टीकाे बहुमत छ । रिपब्लिक पार्टीका केही सांसदहरूले पनि महाअभियाेग प्रस्तावमै मत हाल्न सक्नेछन् ।
पछिल्लो समय जब राष्ट्रपति ट्रम्पले महाभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो, सम्पूर्ण प्रक्रियाले महिनौं लियो । यस पटक भने यही हप्तामै प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी संविधानका अनुसार सदनले राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन अभियोग लगाउन दोषी प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । र राष्ट्रपतिलाई सजाय दिन र उनको पदबाट हटाउनका लागि दुई तिहाई सदस्यहरूकाे सहमति आवश्यक पर्नेछ । बुधबार यसबारे छलफल भएपछि उनी समय अगावै निष्कासित हुन्छन् या रहन्छन् भन्नेबारे निर्णय हुनेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन गत नोभेम्बर ३ मा भएकाे थियाे । निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट बहालवाला राष्ट्रपति ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन उम्मेदवार बनेका थिए । निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार बाइडेन ३०६ इलेक्टोरल कलेज मतसहित राष्ट्रपतिमा विजयी भएकाे हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र सिनेटको संयुक्त बैठकले प्रमाणीकरण गरिसकेकाे छ । अर्का प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार ट्रम्पले २३२ इलेक्टाेरल मत प्राप्त गरेका छन् ।
मकालु खबर 4070 खबरहरु0टिप्पणीहरू
बिन्दवासिनी म्युजिककी अध्यक्ष पक्राउ
प्रदेशगत बृहत् कार्यकर्ता भेला गर्दै दाहाल–नेपाल समूह, शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने